Linux kernel 3.3 horeyba waxay u leedahay RC (Musharax la sii daynayo) | Laga soo bilaabo Linux
Kadib laba toddobaad oo ah Linux kernel 3.2 ayaa la sii daayayLinus Torvalds xayeysiis murashaxii ugu horreeyay ee 3.3 la sii daayo.
Waa kuwan qaar ka mid ah isbeddelada / wararka noocyadan hoose ku yeelan doonaan:
Farsamo cusub oo hagaajin doonta cabirka qaybaha ext4, tani waxay u maleyneysaa inay hagaajineyso waxqabadka iyo xawaare yar marka loo eego qaabkii hore.
Intaa waxaa dheer, shaqooyin ayaa lagu daray koodhka barnaamijka weerar, ayaa kuu oggolaan doonta inaad ka wareejiso xogta la adeegsanayo hal mug illaa mid kale. Waxaan ula jeedaa, tan waxaa loo tarjumay "badal kulul" 😀
Taageerada naqshadaha ayaa lagu daray Qalabka Texas'C6X, ACPI 5.0sidoo kale tikniyoolajiyadda LPAE (Dheeraad Jidh Weyn) loogu talagalay ARM, oo ay la socdaan qaar ka mid ah processor-rada cudud v7 waxay awoodi doonaan inay adeegsadaan wax ka badan 4GB oo xusuusta ah.
Horumariyayaashu waxay kaloo noo sheegeen inay hagaajiyeen taageerada maqalka HDMI darawalada DRM / KMS waayo, AMD iyo jaantusyada garaafka Nvidia.
Fur vSwitch iyo darawal Ethernet ah oo u shaqeyn doona sidii 'koox', taasi waa ... waxay isku dari doonaan dekedo badan oo shabakad ah oo loo yaqaan 'virtual'.
Sidaan horay u sheegnay, Wadayaasha Android ayaa lagu dari doonaa.
Naqshadeeyayaasha garaafyada GMA500 waayo US15W de Intel, sida ku dhacday qaar ka mid ah Hyper V.
Iyada oo dhammaan isbeddeladan, feylka daamurka loogu talagalay musharraxa ugu horreeya ee sii-deynta (RC) wuxuu ka kooban yahay qiyaastii 38.173 faylal, wadar ahaan 15.207.578 sadar oo koodh ah.
Hadda ... Waxaan u maleynayaa inay sax tahay in la xuso in kernel-ka taageerada muddada-dheer wali la isticmaali karo (2.6.32.54 y 3.0.17). Kuwaas ayaa lagugula talinayaa haddii aadan rabin inaad haysatid kernel-kii ugu dambeeyay, haddii aad rabto inaad wax yar u hurto shaqooyin cusub si aad xasillooni u hesho, maahan wax qarsoodi ah in kernel cusub = guud ahaan, dhibaatooyinka xasilloonida.
Sikastaba, kernelkan cusub feker ahaanteyda wuxuu keenayaa dhowr horumar gaar ahaan, kuwa la shaqeeya serverka, kumbuyuutarka adeegsada ... Waxaan u maleynayaa in horumarada xilligan aysan muhiim aheyn 😉
Isha faahfaahinta: H Online
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Linux kernel 3.3 horeyba waxay u leedahay RC (Musharaxa la sii daynayo)
Isbedelada Weyn ee Linux Kernel 3.3,
Isbedelada Waaweyn ee Linux 3.3 Kernel, Tan ugufiican ayaa ah Taageerada ARM
JOJO, dhammaantood waa la dedejiyay ama way iga dhigaysaa.
Sida loo wanaajiyo kabaha Linux-ka ee E4rat